सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कनुका कारण र सुझाव
बुधबार, कात्तिक ३, २०७८ ०५:२९:२०
यो विश्वलाई नेपालको अब्बल गुणस्तरीय शिक्षाको माध्ययमबाट देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक, सांस्कृतिक रुपाञ्तरणको उत्कृष्ट उदाहण प्रसतुत गर्न हामी सक्छौँ र सक्नैपर्छ ।
मंगलबार, साउन २६, २०७८ शेरवहादुर केसी
हरेक देशको विकासका पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षा बिकासको मुख्य मेरुदण्ड हो । यसको प्रचुर बिकास नभई कुनै पनि समाज र राष्टको विकास र समृद्धिको कल्पना गर्नु नै महाभूल र मुर्खता हुन्छ । संसारका समृद्ध र विकसित देशहरुको बिकासको प्रधान कारक तत्व नै शिक्षाको प्रयाप्त विकास हुनु रहेको छ । अमेरिका, चीन, जापान, क्यानडा, अष्टेलिया, दक्षिण कोरिया लगायतका विकसित देशहरुले शिक्षा क्षेत्रको बिकासलाई प्रथम प्राथामिकतामा राखेर अगाडी बढिरहेको पाइन्छ । जसको परिणामस्वरुप ती देशहरुले आफ्नो देश र समग्र विश्वको लागि चाहिने अब्बल तथा दक्ष सिर्जनशील जनशक्तिको प्रयाप्त विकास गरिरहेको अबस्था छ । त्यसकारणले गर्दा ती मुलुकहरुले विकासको मोर्चामा अग्रता कायम गरिरहेका छन् । हाम्रै छिमेकी राष्ट भारत र चीन पनि शैक्षिक बिकासको भर्याङ्गबाट द्रुत विकासको मार्गमा अगाडी लम्किरहेका छन् । केहि दिन अगाडि मात्र अमेरिकी राष्टपति जोइ वायडेनले अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम शिक्षकहरुसँग मनाए र शिक्षकहरुको मात्र तलब भत्ता बढाउनका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा समेत गरे । उनले अमेरिकाको सम्पूर्ण शिक्षा बिभागको जिम्मा एकजना सामान्य शिक्षक मिग्बेल कर्डोनालाई प्रदान गरेका छन् । उनले भनेका छन् “अब फेरी हामीले नयाँ अमेरिकाको निर्माण गर्नुछ र शिक्षक बिना यो संभव छैन् ।”
तर हाम्रो देश नेपालको सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अबस्थालाई गहिरोसित अध्ययन विश्लेषण गर्दा सन्तोषले सास फेर्ने र आरामले निदाउन सक्ने खालको स्थिति छैन् । देशको सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अबस्था निरन्तर खस्किरहेको अबस्था छ भने क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको अबस्था त झनै बैराग लाग्ने खालको छ । हाम्रा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरु त राजनीतिक गुण्डागर्दीका अखडा, ठूला बेरोजगार उत्पादक कम्पनी र प्रमाणपत्रका खोष्टाहरुको बितरण केन्द्र बाहेक अरु के पो हुन सकेका छन् र ? यसरी हेर्दा हाम्रो देशको सार्बजनिक शिक्षा चारैतिरबाट भ्वाङ्गै भ्वाङ्ग परिरहेको लाजमर्दो स्थिति छ । मानब विकासको प्रमुख आधार ठानिएको सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षाको स्तर चिन्ताजनक ढङ्गगले निन्तर ओरालो लाग्नुका पछाडी बिभिन्न कारणहरु छन्, जसको बारेमा यहाँ निम्नानुसार संक्षेपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।
१. सरकारको प्रमुख प्राथामिकतामा शिक्षा नपर्नूः
नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई मसिनो गरेर केलाउँदा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले देशको शैक्षिक बिकासको सवाललाई नीतिगत तथा कानुनी र ब्यबहारिक रुपमा शिक्षालाई प्रधान प्राथामिकतामा राख्न चाहेनन् र कतिपयले चाहेर पनि काम गर्न सकेनन् । अहिलेपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली चलिरहेको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै चलिरहेको छ । गणतन्त्र नेपालको संबिधान बनेर पनि त्यस अनुसार निर्बाचित नयाँ तर निकै शक्तिशाली ठानिएको सरकारले पनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन् । बिभिन्न कार्यदलले दिएका थुप्रै सुझाव अनि प्रतिवेदनहरु पनि डस्टविनमा फालिएको छ । त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन् । सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी अभिबृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन सकिएको छैन् । थरीथरीका शिक्षकहरुको ब्यवस्था गरेर शिक्षकहरुबिच सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक दरारहरु पैदा गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधानिक आयोग नबनाएर त्यत्तिकै लथालिंग बनाएको अबस्था छ । शिक्षक सेवा आयोगले नियमित काम गर्न सकिरहेको छैन् । चार चार बर्षको अन्तरालमा पनि यसले शिक्षकको रिक्त पद पुर्तिका लागि विज्ञापन समेत गर्न सकिरहेको छैन् । स्वयं शिक्षा मन्त्रालय नै लथालिंगको अबस्थामा छ । सक्षम र क्षमतावान नेता र कर्मचारीहरुको रोजाइमा कहिल्यै पनि शिक्षा मन्त्रालय परेन । देशको स्थायी सरकार कहलाउने कर्मचारीतन्त्र पनि शिक्षक, बिद्यार्थी तथा बिद्यालय र समग्र शिक्षाप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक बन्न सकेन ।
यहि कोभिड १९ को खोप पनि नेपालका सेना, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी सबैलाई दिइयो तर दैनिक हजारौँ विद्यार्थीहरुको सम्पर्कमा रहने शिक्षकहरुलाई दिन कुनै जरुरी ठानिएन् । जसका कारण कोभिड १९ को दोस्रो लहर सुरु भए पछाडी करिब २०० भन्दा बढी शिक्षकहरुले मृत्युबरण गर्नुपर्यो । सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गतिबिधि र शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन प्रक्रियाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको काम त सम्बन्धित निकायको भत्ता पकाउने खेल बाहेक अरु हुने कुरै भएन । सरकारले अहिलेसम्म शिक्षामा निकै न्युन लगानी गरिरहेको छ । त्यो लगानी पनि प्रभाबकारी रुपमा उपयोग हुन नसक्दा बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेको छ । यसरी सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्दै देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकासका निम्ति सरकार उदासीन, गैरजिम्मेवार र गैरउत्तरदायी हुनु नै सामुदायिक बिद्यालय र समग्र राष्टको शैक्षिक स्थिति डामाडोल हुनुको प्रधान कारण रहेको छ ।
२. शिक्षण पेशाप्रति युवाहरुको वितृष्णा
भारत, चीन, अमेरिका, फिनल्याण्ड जस्ता विकसित मुलुकहरुमा शिक्षकहरुको वृतिविकास र तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधाहरु निकै आकर्षक र लोभलाग्दो खालको छ । त्यहाँ शिक्षक, बिद्यार्थी, प्राध्यापक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरुको निम्ति शिक्षामा ठुलो धनराशी खर्च गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा त्यहाँ प्रतिभावान र जेहेन्दार युवाहरुको प्रमुख रोजाइ नै शिक्षण पेशा बन्न जान्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप ती मुलुकहरुले अब्बल शिक्षकहरुको प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट विश्वमै गुणस्तरीय शिक्षाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्न सकेका छन् । तर हाम्रो देश नेपालमा त्यसको ठिक विपरित अवस्था रहेको छ । यहाँ शिक्षकलाई दिइने सेवा सुविधा निकै आपत्तिजनक अबस्थाको छ । सरुवा बढुवाको त यहाँ कुनै ठेगानै छैन् । धेरैजसो शिक्षकहरु त सेवा अवधिभर एकपटक पनि बढुवा नभएर सेवानिवृत भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । आवश्यकतानुसार तालिमको अवसर, टिएडिए, आवास, रासन, भ्रमण भत्ता जस्ता सेवा सुबिधा त नेपाली शिक्षकहरुले पाउने कुरै भएन् । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटले त झनै शिक्षकहरुलाई विभेद, अन्याय, अपमान गरेको अबस्था रहेको छ । अधिकांस शिक्षकहरु त अहिले पनि चौमासिक रुपमा तलब पाउने गर्छन् । यसरी शिक्षकहरुले निकै न्युन सेवा सुबिधामा हेपिएर काम गरिरहेको दृष्य टुलुटुलु हेरीरहेका प्रतिभावान युवाहरुमा शिक्षक बन्ने रहर पनि कसरी जागोस् ? यसकारण यहाँ कुनै पनि युवाको रहरको रोजाई शिक्षक बन्ने भन्ने कुरै भएन । बरु काम चलाउको र निकै कहरको पेशा बन्न पुगेको छ आज शिक्षण । यो कारणले पनि हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा निकै प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको अबस्था छ ।
३. आफ्नो पेशाप्रति बफादार.शिक्षकहरुको कमी
जुनसुकै देशको शैक्षिक क्षेत्रको वास्तविक पहरेदार र कारिन्दा भनेकै शिक्षक हुन् । आफ्नो पेशाप्रति बफादार दक्ष र प्रतिभावान शिक्षक नभएसम्म जतिसुकै राम्रो शिक्षा नीति नियम र कानुन बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुन सक्दैन् । हाम्रो देशमा थोरै मात्र शिक्षकहरु आफ्नो पेसाप्रति निकै उत्तरदायी र बफादार छन् । दुखका साथ भन्नुपर्छ यहाँका अधिकांस शिक्षकहरु आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार भएको पाइदैन् । केही शिक्षकहरु त यस्ता छन् जो प्राय स्कुलै जाँदैनन् । स्कुलमा गए पनि कक्षामा जाँदैनन् । कक्षामा गए पनि पुरा समय शिक्षण गर्दैनन् । यदि शिक्षणै गरिहाले पनि आवश्यक वीधि पद्धति र ढङ्ग पुर्याएर शिक्षण गरेको पाइदैन् । केहि शिक्षकहरुमा त आफुले अध्यापन गर्ने विषयवस्तुको न्युनतम ज्ञान पनि नभएको अबस्था छ । आफ्नो विषयवस्तुमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञानै नभएकाले शिक्षण वीधि र शैक्षिक साम्राग्रीहरुको प्रयोग गर्ने त कुरै भएन । केही शिक्षकहरुका लागि त बिद्यालय आराम गर्ने थलो बनेको छ भने केहीका लागि राजनीतिक शक्ति र सत्ता प्राप्तिको जग र भर्याङ्ग दुबै बनेको छ । केही राम्रा भनिएका शिक्षकहरु पनि परिवर्तित समय, परिवेश, विज्ञान तथा प्रविधि अनुसार अपडेट भइरहेको पाइदैन् । यसरी अधिकांस शिक्षकहरुको गलत चिन्तन, प्रवृति, आचरण तथा ब्यवहारका कारणले शिक्षणको क्षेत्रमा केही न केही नयाँ र उच्च योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच र ब्यवहारले ओतप्रोत प्रतिभावान दक्ष र असल शिक्षकहरुको पनि बदनाम समेत भइरहेको छ । यसरी राष्टको शैक्षिक रुपाञ्तरणको एक मात्र बौद्धिक एवम बैचारिक सेना शिक्षक नै आफ्नो कामका लागि मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन् ।
४. अभिभावक शिक्षाको अभावः
हामी सबैलाई थाहा नै छ कि मानिसको पहिलो पाठशाला विद्यालय हो भने आमा प्रथम गुरु हुन् । आमा पछाडीका बुवा लगायत परिवारका अन्य अभिभावकहरु पनि हरेक ब्यक्तिका महत्वपुर्ण शिक्षक मानिन्छन् । कुनै पनि ब्यक्तिले बिद्यालयको प्राङ्गनमा पाइला टेक्नुपुर्व नै उसको बाँकि जीवनलाई हरेक हिसावले प्रभाब पार्न सक्ने थूपै्र राम्रा नराम्रा कुराहरु आफ्ना अभिभावकहरुबाट घरमा नै सिकिसकेको हुन्छ । यसकारण हरेक बालकको समुचित बृद्धि र बिकासका लागि घरपरिवार तथा अभिभावकको वातावरण सकारात्मक र सिकाइ अनुकुल हुनुपर्छ । तर सामुदायिक बिद्यालयका हाम्रा अभिभावकहरु आफ्ना बच्चाहरुको सिकाइ वातावरणको जानकारी लिन स्कुल जाने र आवश्यक पृष्ठपोषण लिने दिने त कुरै छैन् । कहिलेकाहीँ स्कुलले अभिभाबक भेलाको आयोजना गरेर आफ्ना अभिभाबकहरुलाई आमन्त्रण गरेमा एउटा पनि अभिभाबक उक्त कार्यक्रममा उपस्थित नहुने बिडम्बना छ । अभिभावकले कहिल्यै पनि आफ्ना बच्चाको सिकाइ स्तर किन अपेक्षाकृत रुपमा गुणस्तरीय हुन सकेन भनेर सरोकारवाला पक्षलाई कहिल्यै प्रश्न गरेन । यसरी बिभिन्न कारणले हाम्रो देशका धेरैजसो अभिभावकहरुमा आफ्ना बालवालिकाहरुको मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा शैक्षिक विकासको लागि चाहिने आधारभूत न्यूनतम ज्ञान, सीप र ब्यवहार नहुँदा खेरी पनि सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो वालवालिकाहरुको सिकाइमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
५. त्रुटीपुर्ण पाठ्यक्रमः
हाम्रो देशको पाठ्यक्रम सिद्धान्त र गफ केन्द्रित छ । ब्यवहारिक, वैज्ञानिक, जीवनउपयोगीता र सिर्जनात्मकताको बाटोबाट हाम्रो पाठ्यक्रम निकै टाढा छ । जसको परिणामस्वरुप हाम्रो शैक्षिक उत्पादन जागीर र भाषण केन्द्रित छ भने श्रमदेखि टाढा भाग्ने र लागुपदार्थ दुब्र्यसनी लगायत बिभिन्न किसिमको कुलतमा रुमल्लिने खालको छ । आज देश समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गइसक्दा पनि हाम्रो पाठ्यक्रम भने पुरानै दलाल पुजीवादी अर्थब्यवस्थालाई नै मलजल गर्ने खालको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो पाठ्यक्रम अझै पनि ब्यबहारिक, ब्यवसायिक, रोजगार तथा स्वरोजगारमुलक, अनुसन्धानमुलक, सिर्जनशील र जीवन उपयोगी बन्न सकेको छैन् । यसकारणले गर्दा पनि सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अबस्था परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन् ।
सुझाव तथा निश्कर्षः
यसरी अझैं पनि देशको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त र भद्रगोल भइरह्यो भने हामी पुस्तौँ पुस्ता पछाडी रहन्छौँ । हामी कसैलाई पनि यस्तो खराब अबस्थाको आरोप अरुमाथि थोपरेर आफूँ चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुने छुट छैन् । यो खराब स्थिति सिर्जना हुनुमा धेरथोर हामी सबैको भुमिका रहेको छ । यदि साँच्चिकै हाम्रो देशको सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नै हो भने सरकारी पदधारण गरेका कार्यालय सहयोगी देखि प्रधानमन्त्री राष्टपतिसम्मले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गरौँ । सामुदायिक बिद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान र समग्र देशको भविष्य खोजौँ । यसो गर्दा सिंगो राष्टको मुल चासो, माया र लगानी जादुमय ढङ्गले एकाएक सामुदायिक बिद्यालयमा केन्द्रित हुनेछ । यसका निम्ति शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक दल र ती दलका नेता कार्यकर्ता, सरकार तथा त्यसका मन्त्री र कर्मचारी, पत्रकार लगायत सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरु सच्चिएर नयाँ सोच र उचाइबाट एउटा शैक्षिक पुनर्जागरणको राष्ट्रिय महाअभियानको यथाशीघ्र आरम्भ गरौँ । असंभव भन्ने मानवजातीका लागि यो संसारमा केही पनि छैन् । यो विश्वलाई नेपालको अब्बल गुणस्तरीय शिक्षाको माध्ययमबाट देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक, सांस्कृतिक रुपाञ्तरणको उत्कृष्ट उदाहण प्रसतुत गर्न हामी सक्छौँ र सक्नैपर्छ । यो युगीन अबसर, दायित्व र चुनौति हाम्रो पुस्ताको सामु हाजिर भएको छ ।
लेखक रुकुम पश्चिमको शितल मावि चौरजहारीमा कार्यरत मावि तृतिय श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८, १७:५०:००
महान पर्व दशैंको महत्व र इतिहास शुक्रबार, असोज २९, २०७८
हाम्रो शुन्दर प्रकृति, हाम्रो जिउने साहारा बिहीबार, असोज २८, २०७८
म, मेरी आमा अनि मेरो जीवन यात्रा शनिबार, असोज २३, २०७८
मेरो मिल्ने साथी, मेरो मोबाइल फोन शुक्रबार, असोज १५, २०७८
पहिचान हराएका पुराना धारा पधेँराहरु बिहीबार, असोज १४, २०७८
छोरा पाउने संघर्षमा आफैलाई बिर्सिएको एक जीवन शुक्रबार, साउन २२, २०७८